Review of Sambandhaharu [सम्बन्धहरु] | Book by Vijaya Kumar | Nepali Book Review at Nepali Expert
Chiran Sharma rated it
विजय कुमारको 'सम्बन्धहरु'
गत साता काठमाडौं छोड्न केही घन्टा बाँकी रहँदा के बिर्से के बिर्सेजस्तो लाग्यो । विमानस्थलतिर जाँदै गर्दा केही समय बचेको थियो । एक दुई वटा किताव ‘पिक’ गर्ने विचार गरेर भोटाहिटी छिरेँ । त्यहाँ पार्किङ समस्या भएकाले ड्राइभरलाई रानीपोखरी घुमेर आउनु भन्दै पुस्तक पसलमा छिरें । विजय कुमारका सम्वन्धहरु, शीवा साहको कान्छा महारानी, झमक घिमिरेको जीवन काँडा कि फूल किताब टिपे । एकजना साथीले गिफ्ट दिएको सुशीला कार्कीको न्याय र सुरुभक्तको पागल बस्ती बोकेर आएँ । वास्तवमा मैले पुस्तक पसलमा दधी सापकोटोको वनको वैभव र जीवा लामिछानेको देश देशावर खोजेको थिएँ । जीवा दाईको किताव बजार आएको छैन रहेछ, तर दधिजीको किताव मैले खोजेको पसलमा थिएन् अर्कोमा जाने समय पुगेन, त्यसैले ल्याउन सकिनँ । मगाउने प्रयासमा छु । लन्डन आएपछि यी सबै पुस्तक पढ्छु भन्ने लागेको छैन् तर मान्छेको मुड न हो पढिपो हाल्छिकि भन्ने लागेको छ ? हेर्दै जाउँ । अहिले विजय कुमारको सम्वन्धहरु पढ्न थालेको छु । पुरै पेज होइन् मनले खाएका पढ्म पढ्म लाग्ने मात्र हेरेको छु । विजय कुमार नेपाली पत्रकारिता जगत्का एक चर्चित कोकोकोलाजस्तै ब्रान्ड हुन् । अरुले झ्याप्पै त्यो ब्रान्ड मेट्न सक्दैन् । उनीको आफ्नै शैली छ र केही पात्रहरुको दायराभित्र उनीले पत्रकारिताको जीवन व्यथित गरेका छन् । टेलिभिजन कार्यक्रममा जस्तै सम्वन्धहरुमा पनि आफूलाई मनपर्ने पात्रहरुलाई कहिनकही जोडेका छन् । प्रदिप गिरी, डा. भगवान कोइराला, क्या. रामेश्वर थापा, कैलाश सिरौरिया, जुगल भुर्तेलदेखि ऋषि धमलासम्मका पात्रहरुको चर्चा गरेका छन् । अहिलेसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम भेटेको छैन् । पढ्दै जाँदा भेटिएला । देशको एक कुसल र चर्चित पत्रकारले अर्को संस्थाका कार्यरत सहकर्मी पत्रकार सुम्निमालाई चाहिँदो भन्दा बढी उचालेर आफ्नै अस्थित्व मेट्न खोजेका छन् । मैले सुनेको र बुझेअनुसार विजयले टेलिभिजनबाट ख्याति कमाए, कान्तिपुर पव्लिकेशनबाट स्थापित पत्रकार हुन् । तर उनले यो किताबमार्फत् अन्नपूर्ण पोष्ट चाहिनेभन्दा बढी उचालेर कान्तिपुर प्रकाशनमाथि अन्याय गर्ने प्रयास गरेका रहेछन् । उनीको खुशीमा जस्तै सुरा र सुन्दरीको चर्चा पनि गरिएको छ । खुसीमा जस्तै बालुवाटार वाल वालमा दारु खाएर छादे जस्तै सम्वन्धमा सुरा र सुन्दरीका प्रशंसा सम्बन्धमा बगेका छन् । खुसीमा जस्तै केही विदेशीहरुसँग सम्वन्ध रहेकोको प्रसँगलाई घुमाई फिराई कितावमा पस्केका छन् । उनले सामान्य ट्वीटर एकाउन्ड कसरी चलाउने लगायत सोसियल मिडियाको प्रसँगसमेत जोडेर कितावलाई फितालो बनाएका छन् । वास्तवमा यो विजय कुमारको आत्म केन्द्रीत किताव हो । तपाईंहरु विजय कुमारको खाँटी फ्यान हो भने आजै यो किताव सुरक्षित गर्नुहोला । पुरै किताव पढ्न बाँकी नै छ । किताव पढ्दा उनको बोलीमा जस्तै शब्दमा मिठास आउँछ । 'मिडिया चप्पल कारखाना हो' पूरा जीवन मिडियाको कारखानामा बिताएका विजयले मिडिया भगवान होइन् भनेका छन् । मिडियाका साहुहरु र तीनले भर्ना गर्ने सम्पादकहरु सत्यवादी हरिश्चन्द्रका मानस पुत्र पनि होइनन् भनेका छन् । विजयले भनेका छन्– ‘वैश्ययुगमा चप्पल कारखाना चलाउनु र मिडियाबीच खासै फरक रहँदैन । मिडिया उद्योग पनि एउटा कारखाना हो, जसले सही वा गलत सूचना उत्पादन गर्छ र बेच्न खोज्छ ।’